केदार घिमीरे अर्थात माग्नेबुढा डिप्रेसनको शिकार कसरी बने? - Glamorous Icon
२४ भाद्र २०७३, शुक्रबार १२:३५
Home›GIcon News›केदार घिमीरे अर्थात माग्नेबुढा डिप्रेसनको शिकार कसरी बने?
आफु पिडामा हुदाँ समेत सधै दर्शकलाई हँसाईरहने अभिनेता केदार घिमिरे ‘माग्नेबुढा’ लामो समय देखि पेटको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । प्राय कार्यक्रममा देखि रहने उनि सार्वजनिक ठाउमा नदेखिएको पनि धेरै भइसकेको छ । आफ्नै लगानी तथा अभिनय रहेको चलचित्र छक्का पन्जाको रिलीज मिती आइसक्दा समेत उनि मिडीयामा देखिएका छैनन् । सबैलाई चासोको बिषय बनेको छ आखिर उनलाई के भएको छ । उनलाई पेटको समस्या संगै डिप्रेसन समेत थपिएपछि उनिको कलाकारीतामा पहिले झैँ सक्रियता हुन् नसकेको हो ।
#आफुलाई पेटको समस्या संगै डिप्रेसन समेत थपिएको केदार आफैले बताएका छन् । केही समय अघि खासखुस नामक कमेडी छोटो चलचित्र युट्युबबाट सार्वजनिक गर्दै आएका केदार पछिल्लो समय यो कार्यमा समेत सक्रिय छैनन् । उनि कोही मान्छे हरु संग समेत बोल्न रुची राख्दैनन् । डिप्रेसनको शिकार भएसंगै उनि घरमा समेत कोही नआवोस भन्ने चाहन्छन् । नजिकका साथीभाईका अनुसार उनको डिप्रेसनको मुख्य कारण भनेको पेटको समस्या हो । आफ्नी आमा समेत पेटकै समस्याका कारण मरेपछि उनि आफु समेत नबाच्ने बताउदै आएका थिए । अर्को तिर लामो समय देखिको सहकार्य सिताराम अर्थात धुर्मुस संग छुटेपछि उनिमा एक किसीमको चिन्ता बढेको स्रोत बताउछ ।
मोडल उरुषा पाण्डेको नयाँ गीत आयो ( ...
आज देखि देशका सम्पूर्ण ८० बढी हलहरुमा ...